(၁၁၀)ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာညီလာခံကာလအတွင်း ချမှတ်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် နိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်များအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်
ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့အတွက် ရည်ညွှန်းလက်ကားဈေးနှုန်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့တော်များအတွက် ရည်ညွှန်းလက်လီဈေးနှုန်းများ
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E.Mr. Prak Sokhonn နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း (၇)ဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
၁။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အကြိမ်(၁၁၀)မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ ညီလာခံကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါဝင်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲ အိုင်အယ်လ်အိုအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့နှင့် စံနှုန်းများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာကော်မတီတို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တစ်ဖက်သတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် နိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်များအသီးသီးချမှတ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး H.E.Mr. Prak Sokhonn နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း(၇)ဖွဲ့တို့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ဗဟိုဌာနအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ (၁၇)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်အဆင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အစည်းအဝေးများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် NUG၊ PDF အမည်ခံ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဦးက ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်း ပြောကြားကြသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ ဥကရစ်ထ ကျေးရွာအနီးရှိ စစ်ဗျူဟာ အရေးကြီးနေရာတစ်ခုအား တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက အောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ရရှိ
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံး လုံခြုံမှု ပြည့်ဝစွာဖြင့် မိမိတို့၏ လူမှုစီးပွားဘ၀အား လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာတွင်ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်၊ ဝေါလေဒေသအတွင်း ဥကရစ်ထ စစ်ဆင်ရေး ခြေကုပ်စခန်း၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်ကြောင်းအား KNLA အဖွဲ့နှင့် PDF အမည်ခံ အကြမ်းဖက်သမားများက သာလွန်အင်အား အများအပြားအသုံးပြု၍ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှစတင်၍ အကြိမ်ကြိမ် လာရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံ‌တော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် Naypyitaw State Academy တည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်ရှိ Naypyitaw State Academy(NSA) တည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် လူငယ်၊ လူရွယ်များအား ကြိုဆိုရေးစခန်းများ ဖွင့်လှစ်လက်ခံခြင်းနှင့် နီးစပ်ရာလုံခြုံရေးစခန်းများ၌ လက်ခံခြင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်
နယ်စပ်ဒေသအသီးသီးနှင့် အချို့သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအတွင်း ရောက်ရှိနေသည့် CDM ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် လူငယ်၊ လူရွယ်များအား နယ်စပ်ကြိုဆိုရေးစခန်းအသီးသီးနှင့် နီးစပ်ရာ တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းအသီးသီးသို့ ဆက်သွယ်၍ ဥပဒေဘောင်အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ သတင်းပို့ဆက်သွယ်သူများကို သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ နေ့စဉ်ပြည်သူ့ဘဝတွင် အေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေး အာမခံချက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က အသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရှိရသည်။ ကြေညာချက် အပြည့်အစုံမှာ -
အကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြေညာထားသော CRPH၊ NUG နှင့် ယင်းတို့၏ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းတို့နှင့်ဆက်နွယ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ပျက်ပြားစေရန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို အကြောက်တရားများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အစိုးရယန္တရားများ ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်လျက် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ဝါဒဖြန့်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကို လူမှုကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Prak Sokhonn ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်သည် အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Prak Sokhonn ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုဗဟိုဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၁။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မှ ဇွန်လ ၁၁ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် အကြိမ်(၁၁၀)မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာ ညီလာခံကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပါဝင်တက်ရောက်မှုမရှိဘဲ အိုင်အယ်လ်အိုအုပ်ချုပ်
အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီး H.E.Mr. Prak Sokhonn နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၇)ကြိမ်မြောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ ခေါ
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားလုံး လုံခြုံမှု ပြည့်ဝစွာဖြင့် မိမိတို့၏ လူမှုစီးပွားဘ၀အား လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးအတွက် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများအား အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။ ထ
ပခုက္ကူဦးအုံးဖေတည်ထောင်သော (၂၈)ကြိမ်မြောက် ပခုက္ကူစာပေဆု
“စာဖတ်ပရိသတ်ပြည်သူများအတွက် အကျိုးပြုစာပေများ ရှင်သန်ထွန်းကားရေးနှင့် မြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရန်”ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပခုက္ကူမြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနေ သိန်းတစ်ရာဆေးပေါင်းရုံပိုင်ရှင် ဦးအုံးဖေက သူ၏စာပေဒါန မတည်လှူဒါန်းငွေများဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ ပခုက္ကူစာပေဆုကို နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် (၂၈)ကြိမ်မြောက် ပခုက္ကူစာပေဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်နေကြလေပြီ။
နှစ်တစ်ရာတိုင်၊ သစ္စာခိုင်မြဲ၊ သမဝါယမအောင်လံမလဲ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ
နှစ်(၁၀၀)ပြည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သမဝါယမနေ့ကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးထဲ ဆရာဇော်ဂျီ ခံစားရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သွားပြီးသတိရလိုက်မိပါတယ်။ နှုတ်ကလည်း သူ့အလိုလို ကဗျာစာသားတစ်ပိုဒ်ကို ရွတ်ဆိုမိလိုက်ပါတယ်၊ “ အယက်အကန်ခံလို့ ၊ ဗေဒါပျံ အံကိုခဲ ၊ ပန်းပန်လျက်ပဲ ” ဆိုပြီးတော့လေ။
ယဉ်ကျေးလိမ္မာပဒေသာ ၃၈ - ဖြာ မင်္ဂလာ
၃၈-ဖြာမင်္ဂလာ ကဗျာများထဲက ဆဋ္ဌမမြောက်ကဗျာပေါ့ကွယ်။ “ရှောင်ကြဉ်ရေးမင်္ဂလာ” ကဗျာလို့ခေါ်တယ်။ ရှောင်ကြဉ်ရေးမင်္ဂလာလေးပါးကို ကဗျာအဖြစ် ဆရာကြီးဒဂုန်ဦးဆန်းငွေက ရေးစပ်သီကုံး ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဆိုသည်မှာ “မည်သူမဆို ရာထူးတာဝန်အရ ပေးအပ်ထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုကာ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် “ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို” ဦးတည်သော ပြုမူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုမူလုပ်ဆောင်သည့်အခြေအနေကို ဆိုလို သည်” ဟု အောက်စ်ဖို့ဒ်အဘိဓာန်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းခံရသူများဖြစ်ရာ
ဒေသလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပြုနေသည့် တောင်ကြီးခရိုင်မှ လမ်းကွန်ရက်များ
ပဲပုပ်၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ သစ်သီးဝလံ၊ ပန်းမန်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စသည့် တောင်ကြီးဒေသ ထွက်ကုန်များသည် ဖြူ၊ နီ၊ ပြာ၊ ဝါအရောင်စုံဖြင့် လတ်ဆတ်နေသည်။ တောင်ကြီးဈေးအတွင်း ဈေးဖွင့်ချိန် နံနက်ခင်းမှသည် ဈေးသိမ်းချိန် ညနေပိုင်းအထိ ရောင်းဝယ်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် စည်ကားနေသည်မှာ ဒေသလူမှုစီးပွား ဝေစည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လှစ်ဟပြသနေသကဲ့သို့ပင်။
နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူနေမှုအဆင့် မြင့်မားရေးတို့အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော၊ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလျက်ရှိသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် “သုံးတတ်လျှင်ဆေး မသုံးတတ်လျှင် ဘေး”ဆိုသကဲ့သို့ စနစ်တကျ သတိတရားဖြင့် သုံးစွဲပါက အကျိုးရှိသော်လည်း သတိလက်လွတ်၊ မဆင်မခြင်၊ ပေါ့ပေါ့ဆဆ သုံးစွဲကြပါက ရာသီမရွေး လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေသည်။
မုဒုံမြို့နယ်ဂုဏ်ဆောင် (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးရှင်နှစ်ဦးအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
မိုင်းယောင်းမြို့၌ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပ
မြစ်သားမြို့တွင် မြန်မာ့ရိုးရာခြင်းလုံး အခြေခံထိ(၆)ချက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်
တမူးမြို့တွင် အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသိပညာပေး (Talk Show) ပြုလုပ်
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် Community Center ၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် Talk Show ကျင်းပ
ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်(ဗဟန်း)လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Centre ၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ် Talk Show ကျင်းပ
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဘားအံ) ၏ပထမနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား /ကျောင်းသူများအား ကြိုဆိုသည့် မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲကျင်းပ
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တွင် "သမဝါယမ အကြောင်း"အသိပညာပေး Talk Showကျင်းပ
မိုင်းယောင်းခရိုင် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဝမ်လဲကျေးရွာ ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်